अन्मोल के सि ले फेरी प्रमाणित गरेर देखाईदियो कि नेपाली फिल्मी जगतमा उनै एक योग्य क्यप्टेन भनेर - Namasteholland, News, Information and Technology
१७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १३:२५0173
काठमाडौँ। शुक्रबारबाट चर्चित नायक अनमोल केसी अभिनीत चलचित्र ‘क्याप्टेन’ रिलिज भएको छ। चलचित्रमा नायक केसीलाई पहिलो पटक फुटबल खेलाडीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। निरुत सिह र भुबन के सि को गेष्ट अपिरेन्स लाई पनि अती उत्साहित किसिमले लिईएको छ।साथमा सरोज खनाल र सुर्य माला खनाल को बेजोड प्रस्तुती त छदैछ ।
चलचित्रमा प्रियङ्का एमभी, सुनिल थापा, प्रशान्त ताम्राकार, बुद्धि तामाङ, विल्सन विक्रम राई लगायतका कलाकारको पनि भूमिका छ । दिवाकर भट्टराईको निर्देशनमा बनेको चलचित्रको निर्माता भुवन केसी र अनमोल केसी रहेका छन्। चलचित्रमा सामिप्यराज तिमल्सिनाको कथा रहेको छ।
हेर्नुस् चलचित्र हेरेपछि दर्शकले कस्तो प्रतिक्रिया दिए।
२८ माघ २०७५, सोमबार ११:४०050
५ असार २०७६, बिहीबार ०७:५२047
Hey Buddy!, I found this information for you: "अन्मोल के सि ले फेरी प्रमाणित गरेर देखाईदियो कि नेपाली फिल्मी जगतमा उनै एक योग्य क्यप्टेन भनेर". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/4889-2/. Thank you.